स्थिति सामान्य नभए धेरै पुष्प व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउँछ
काठमाडौं । कोरोना महामारीसँगै सबैजसो व्यवसायीक क्षेत्रमा संकट देखा परेको छ । व्यवसायीहरु व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्थासमेत बन्दै गएको छ । मुलतः उत्पादनमुलक उद्योगहरु दिर्घकालीन रुपमा नै संकटमा पुगेका छन् ।
आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख देखिएको पुष्प व्यवसाय पनि पछिल्लो महामारीकै कारण समस्यामा पुगेको चर्चा छ ।
हामीले पुष्प व्यवसाय र यसको पछिल्लो व्यवसायीक अवस्थाबारे पुष्प व्यवसायीसँग जान्ने प्रयास गरेका छाैं। पुष्प व्यवसायसँग सम्बन्धित विविध विषयहरुलाई समेटेर संसार न्यूज डटकमका लागि राजेन्द्र बरालले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजुसँग लिएको संवादको सम्पादित अंश ।
पछिल्लो कोरोना महामारीले सबैजसो व्यवसायीक क्षेत्रलाई संकटमा पुर्याएको देखिन्छ । महामारीले पुष्प व्यवसायीलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्यो ?
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस(कोभिड-१९)का कारण सरकारले गरेको लकडाउनले पुष्पव्यवसाय नराम्राेसँग प्रभावित भयो । यसको प्रभाव विश्वव्यापि रुपमा नै पारेको र अझै पनि त्यसको प्रभाव देखिएकै छ ।
तर, यहि बीचमा नेपालीहरुका महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु पनि आएकोले केहि हदसम्म भएपनि व्यापार हुन थालेको छ । यसले व्यवसायीहरुले थोरै भएपनि राहतको महशुस गरेका छन् । लकडाउनका कारण पुष्प व्यवसायीहरुले आफ्नो बोटविरुवामा पनिसमेत हाल्न नपाउँदा दैनिक एक करोडसम्मको क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।
लकडाउनका कारण धेरै व्यवसायीहरु व्यवसायनै छाडेर वस्नुभएको छ । उहाँहरुलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौं । यहिबीचमा कति आउनुभयो पनि भयो, भने कतिपय व्यवसायमा फर्कन नै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
गत चैत्र यता मात्रै पनि धेरै व्यवसायीहरु पूर्णरुपमा बन्दै भए । स्वास्थ्य सुरक्षाको चुनौतिका बावजुत पनि व्यवसायहरु संचालनमा आउन थालेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरुले एशोसिएसनको सहयोगमा आफ्नो व्यवसाय पुनः संचालनमा ल्याएका पनि छन् ।
दशैं तिहारकोे लागि भनेर कतिपय व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरेर सयपत्रिको उत्पादन गर्न तिर लगायौँ । पहिलाको तुलनामा हाल ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र व्यवसायीहरु आफनो व्यववसायमा फर्किएका छन् भने लकडाउनले गर्दा काठमाडौंमा टिक्न नसकेर कतिपय गाउँ गएका व्यवसायीहरु फर्किएका छैनन् ।
व्यवसाय सञ्चालन नभएपनि बजारमा फुलको अभावत त्यति धेरै देखिएको छैन नी ?
हो, अहिले भारत लगायतका ठाउँहरुबाट फुल आयत नहुँदा पनि बजारमा त्यति धेरै अभाव देखिएको छैन । यसको एउटा कारण माग कम हुनु पनि हो भने एशोसिएसनले अघिल्ला वर्षहरुदेखि नै भारतलगायत अन्य मुलुकबाट फुल आयात नगर्ने पोलिसि लिएको थियो । लकडाउनकै बीचमा पनि गत असारदेखि नै दशैं तिहार लक्षित फुल उत्पादन थालेका थियौं भने भारतबाट ल्याउन खोजिएका फुल नियन्त्रणमा लिएर नस्टसम्म गयौँ । हामी आफैंले बजारमा अभाव नहुने गरि तयारी गरेको कारण अहिले समस्या छैन । एशोसिएसनले फुलको आयतमा रोक लगाएकै कारण नेपाली फुलले राम्रो बजार लिएको छ, जसका कारण अहिले व्यवसायीहरु खुशी छन् ।
कोरोनाका कारण ४ महिना पूर्णरुपमा देश ठप्प रहँदा सोचेजति व्यवसाय त भएन तर विभिन्न समस्याका वापजुत पनि २ अर्ब २५ करोडको व्यापार गर्नभने सफल भएका छौँ ।
अनुमानित कति परिणाममा फुलको उत्पादन हुँदै आएको छ ?
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्व ४२ करोडका फुलको कारोबार भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्व बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष लिएका थियौं । चालु आर्थिक वर्षमा भिजिट नेपाल २०२० लाई पनि प्रमुख कोरावार गर्न सकिने भनी आकंलन गरेका थियौँ । नेपालमा ठुला–ठुला व्यवसायहरुको सुरुवात भएकाले व्यवसायीहरु उत्साहित हुदै पुष्प व्यवसायमा लगानि बढाउने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम भइरहेको थियो । लक्ष अनुसार काम पनि भईरहेको थिया तर कोरोनाका कारण ४ महिना पूर्णरुपमा देश ठप्प रहँदा सोचेजति व्यवसायत भएन तर विभिन्न समस्याका वापजुत पनि २ अर्ब २५ करोडको व्यापार गर्नभने सफल भएका छौँ ।
लकडाउन कै बीच पनि सरकारले पुष्प व्यवसायहरु संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियोे त्यो निर्णयले केहि राहत त मिल्यो होला नी ?
लकडाउनकै बिचमा पनि सरकारले फर्म संचालनको अनुमती त दियो तर, बजारमा माग नहुँदा संचालनको अनुमती पाए पनि खासै फर्म संचालकमा उत्साह देखिएन । सरकारले फर्म संचालन गर्न दिईए पनि आवात जावतमा समस्या सिर्जना भएपछि व्यवसायीहरुमा थप निरासाको अवस्था आयो र पछि मन्त्रालयसँगको समन्वयन गरेपछि मात्र ओहोर–दोहोरमा सहजता आयो ।
व्यसायीहरु पलायन हुने अवस्था कतिको छ ?
अहिलेको अवस्था नै कायम रहे यसै भन्न सकिन्न । कृषकहरु जसोतसो टिकिरहनुभको छ । अहिले २० प्रतिशतभन्दा बढि कामदारहरुले रोजगारी गुमाई सकेको अबस्था छ । पुष्प व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुले जग्गाको भाडासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा आईसकेको छ । अहिलेको अवस्था चाडैं सामान्य नभए धेरै व्यवसायीहरु पलायन नै हुने अवस्था आउँछ । बैंकको ऋण र सरकारलाई तिर्नु पर्ने करले गर्दा व्यवसायीहरु पलायनको सम्भावना बढि देखिन्छ ।
केहि व्यवसायीहरुले सहुलीयतपूर्ण कर्जाकै लागि भनेर श्रीमतीको नाममा व्यवसाय दर्ता पनि गरे । तर, बिना धितो कर्जा दिने कुुरा जति सुन्दा सहज छ प्रकृया सारै झन्झटिलो रहेको छ । बैंकको पकृया सजिलो बनाउनको लागि केहि बैंकहरुसँग हामीले संस्थागत रुपमा छलफल पनि गर्यौं तर हामीले गरेको प्रयास सफलहुन सकेन ।
राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा योजनाभित्र फ्लोरिकल्चर अटाउन सक्यो कि सकेन ?
पुनरकर्जा र मौद्रिक नितिमा सरकारले समेटेको छ तर अधिकांस पुष्प व्यवसायीहरुको पहुच बैंकसम्म नहुँदा उनीहरुले सहकारीहरुबाट कर्जा लिएर व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । सरकारले पनि बैकका ऋणीहरुलाईमात्र पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएकोले पुष्पव्यवसायीहरुलाई सरकारको पुनरकर्जा नितिले प्रभाव पर्न सकेन ।
सहुलीयतपूर्ण कर्जाको लागि पहल कदमी ?
केहि व्यवसायीहरुले सहुलीयतपूर्ण कर्जाकै लागि भनेर श्रीमतीको नाममा व्यवसाय दर्ता पनि गरे । तर, बिना धितो कर्जा दिने कुुरा जति सुन्दा सहज छ प्रकृया सारै झन्झटिलो रहेको छ । बैंकको पकृया सजिलो बनाउनको लागि केहि बैंकहरुसँग हामीले संस्थागत रुपमा छलफल पनि गर्यौं तर हामीले गरेको प्रयास सफलहुन सकेन । हामी पुष्प व्यवसाय जोगाउनु पर्यो भनेर हारगुहार गर्दै कृषि मन्त्रालयसम्म पनि पुग्यौं तर विषम परिस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट नै सबैले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नु भन्ने जवाफ आएपछि हामी निरास पनि भयौं ।
हाल यो व्यवसायमा कतिले रोजगारी पाईरहेका छन् ?
लकडाउनका कारण हाल २० प्रतिशतको हाराहारीले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा पनि ३० देखि ३५ हजारले यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाईरहेका छन् ।
निर्यात निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?
बिगतको तुलनामा त निर्यात त्यति सकारात्मक छैन । तर यो संकटको अबस्थामा पनि खाडिलगायतका केहि युरोपियन र अमेरिकन मूलुकहरुमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको फुल निर्यात गरेका छौं । यो बिगतको तुलनामा भने निकै कम हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति…
माघ २८, काठमाडौं । शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायिहरुको संगठन स्वतन्त्र शैक्षिक…
ओलीजीको यो कदम घोर प्रतिगामी कदम हो –लक्ष्मण पन्त
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको सूचना ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़